Soo -saarayaasha Alaabta | Shiinaha Products Factory & qeybiyeyaasha
Mashiinnada Qodista Qotada Dheer
Horizontal Machine Drilling Machine
Mirco god mashiinka qodista qoriga
Mashiinka qodista qoriga ee CNC oo keliya
Mashiinka qodista qoriga ee CNC Double
Afar mashiinka CNC ee qodista qoriga
3 dhidibka CNC Deep god god Drilling Machine
Isku -darka BTA Iyo Mashiinka Qodista Qoryaha
BTA Deep Hole Drilling Iyo Mashiinka caajiska ah
T2120G BTA Qodista Godka Dheer Iyo Mashiinka Caajiska
T2250A BTA qodista godka qotada dheer iyo mashiinka caajiska ah
TK2125 BTA qodista godka qotada dheer iyo mashiinka caajiska ah
TK2180 T2250A BTA qodista godka qoto dheer iyo mashiinka caajiska ah
Round Bar Karinta Deep godka Machines Drilling
Qoryaha Deep Gunle Gun
Qoryaha Carbide -ka adag
Tababarayaasha Qoriga Brazed
Dhoolatusyada Qoriga ee la tilmaami karo
Tallaabooyinka Qorista Qoryaha La Tilmaami Karo
Qoriga Qoriga Bush Iyo Tilmaan
Qoryaha Daloolinta Qoriga
Dhibaatada Iyo Xallinta
BTA qodista Deep Hole
oo aan lahayn biibiile dahaarka leh oo leh dalool Qoriga qoriga
Waxoogaa qoriga la soo dhoofiyay iyo usha aaladda tungsten gundr carbide ...
Biibiile Single Iyadoo coolant Gundrill
Daad CNC godka Deep gundrill laylis Bit
Baarka Round qodista mashiinka godka qoto dheer
Saddex ayaa isku duwa mashiinka qodidda godka qoto dheer
Isku dar BTA iyo mashiinka qodista qoriga
Booqday Furimaha Dagaalka qod
Dhoolatuska qoriga iyo dhoolatuska BTA
BTA Deep Hole Caajis iyo Mashiinka Qodista
Saddex mishiin qodista Gun Axis
Mashiinka Qodista Qoriga
Aaladda injineernimada daloolka qoto dheer dhexroor weyn oo ah hal tuubo BTA qalab qodid
Nidaamka BTA (Boring & Trepanning Association) waxaa inta badan soo saaray koox caalami ah oo soo saarta qalabka. Nidaamkani wuxuu ahaa mid ka mid ah nidaamyadii ugu horreeyay ee guulaystay ee qalabka ka -saarista chip -ka gudaha, waxaana ka mid ah qodis, caajis, iyo madax xanaaqsan waxaana loo tixgeliyaa nidaamka ugu wanaagsan ee god -ka -samaynta shaqada ee adeegsada qalabka qaboojiyaha cadaadiska sare.
Dhoolatuska qoriga oo af kaliya ah (oo hadda loo yaqaan qodista qoriga) ayaa loo adeegsadaa in lagu farsameeyo godad qoto dheer oo leh dhexroor Φ1 ～ 40mm iyo dherer-ilaa-dhexroor ah 100 ～ 250 jeer. Hadda waa habka kaliya ee lagu farsameeyo godadka qoto dheer ee dhexroorka yar oo leh dhexroor Φ1 ～ 6mm. Saxnaanta godadka mashiinnada waxaa lagu xasilin karaa IT 8 ～ 10, shaqsiyaadkuna waxay gaari karaan IT6 ～ 7; xajmiga dusha ayaa lagu xasilin karaa Ra12.5 ～ 3.2μm (▽ 3 ～ ▽ 5), shaqsiyaadkuna waxay gaari karaan Ra0.8 ～ 0.4μm (▽ 7 ～ ▽ 8), toosnaanta godka waxay gaari kartaa 0.05mm/ m. Qoryaha qoryaha waxay leeyihiin codsiyo aad u kala duwan. Ka sokow habaynta qalabka birta caadiga ah iyo kabka, waxay sidoo kale ka shaqayn karaan biraha jilicsan, biraha daawaha ah, biraha aan macdanta lahayn, iyo biraha kulaylka u adkaysta.
Waxoogaa qoriga la soo dhoofiyay iyo usha tungsten carbide gundrill tool
Dhoola -tusyada qoryaha ayaa ah dhoolatusyo si toos ah loo duubay kuwaas oo u oggolaanaya in dheecaanka goynta lagu mudo iyada oo godka daloolin ee daloolinta wejiga goynta ah. Waxaa loo adeegsadaa qodis qotodheer-qotodheer-dhexroor ah 300: 1 ama ka badan ayaa suurtogal ah. Qoryaha qoryaha ayaa ah tusaalaha muuqda; sidaa darteed magaca. Isticmaalka kale waxaa ka mid ah samaynta, wax -dhimista, iyo soo -saaridda qalabka muusig -qoryaha, sida tuubooyinka uilleann, maadaama layliyada qorigu qodi karto godad dhaadheer oo toosan biraha, qoryaha, iyo balaastikada qaarkood. Qaboojiyaha wuxuu siiyaa saliid iyo qaboojin cidhifyada jarista wuxuuna ka saaraa godadka godadka. Dhoolatusyada qoryaha casriga ah waxay adeegsadaan talooyinka carbide -ka si ay u dheereeyaan nolosha una yareeyaan qiimaha guud marka la barbar dhigo talooyinka birta.
isticmaalka qoriga qoriga ee warshadaha jarista birta oo ay ku jiraan baabuurta, diyaaradaha iyo aerospace, dhismaha, caafimaadka, caaryada iyo aaladda iyo dhinta, hydraulics, pneumatics, iyo inbadan.
Warshadda Professinal waxay soo saartaa qoriga qoriga ee aan la garanayn D11.02-50.02mm, Adeegso galinta Iscar iyo suuf, tayada gurateen, sidoo kale qoriga qodista ee warshadaha jarista birta oo ay ku jiraan baabuurta, diyaaradaha iyo hawada, dhismaha, caafimaadka, caaryada iyo aaladda oo dhinta, hydraulics, pneumatics , iyo in ka badan.
BTA Deep Hole Caajis iyo Mashiinka Qoditaanka Daloolin adag: 20mm-150mm Counter caajis/gubasho: 20mm-800mm Hole trepanning: 50mm-800mm Mashiinkani waa mashiin gaar ah oo lagu farsameeyo qaybaha daloolka qotada dheer, kaas oo ku habboon qodista iyo caajiska daloolka qoto dheer ee cylindrical qaybo. Inta lagu guda jiro qodista, habka BTA waa la qaatay, taas oo ah, quudiyaha saliidda wuxuu siiyaa saliid, goynta ayaa laga soo saaraa gudaha tuubada qodista ilaa baaldiinka qashin -qubka ee sariirta gadaasheeda iyada oo la goynayo ...
Shandong Deshen Makiinado Warshadaynta Co., Ltd. Qoryaha la tilmaami karo 11.5mm-50mm qoriga brazed 3mm-45mm qori carbide adag 1mm ilaa 12mm BTA layliyo 17mm-160mm
Qoriga qoriga waa aalad goyn khaas ah oo loo isticmaalo mashiinka qodista qoriga. Drillstar 's qoriga biibiile ee birta ah ee birta leh ayaa leh sifooyin soo socda: Qiyaasta dhexroor: 3 - 40mm Dhererka guud: 5000mm (ugu badnaan) Nooca hal mar la buunbuuniyo ayaa ah nooca ugu badan. Iyo kuwa ugu badan ee la isticmaalo. Waxay ka kooban tahay hal qayb oo carbide laylis ah iyo bir qoditaan bir ah oo la geliyo carbide. Tuubada iyo shank waxay ka samaysan yihiin wax bir ah. Iyo daaweynta kulaylka. Saddexda qaybood ayaa loo qoondeeyay inay noqdaan qalab dhammaystiran. Drillstar wuxuu iibiyaa qoriga dr ...
Tababarrada Qoriga ee la tilmaami karo Tababarradaan waxaa lagu bixiyaa dhexroor kasta laga bilaabo 11.52mm illaa 50mm. Kaliya 5 cabbir oo la geliyo ayaa daboolaya baaxadda oo dhan. Gelitaanadu si toos ah ayey u habboon yihiin mana u baahna hagaajin si loo soo saaro caajisyada cabbirka. Tababarrada waxay ka faa'iideystaan ​​suufka hagaha ee suufka duuban ayaa sidoo kale la heli karaa. FAA'IIDOOYINKA Kala -duwanaanshaha loogu talagalay isticmaalka lathe, xarumaha mashiinnada iyo mashiinnada daloolka qoto dheer. Wax -ku -oolnimada sare iyada oo si gaar ah loo horumariyey joomatari -goynta goynta loogu talagalay samaynta chip -ka dhinta Waxay yareysaa waqtiga dhimista oo ka dhasha is -weydaarsiga degdegga ah ee ...
Faahfaahinta badeecadda GD-600 Mashiinka fiiqista qoriga ee caadiga ah wuxuu qaatay waddo sax ah oo duudduuban, matoor xawaare sare leh. Mooshinku waa mid siman oo is -jiidku waa yar yahay. Mashiinka wax shiidi kara wuxuu ku wareegi karaa diyaarad siman iyo mid toosan. Si aad ah loogu dabaqi karo aaladaha mashiinka oo leh Qalabaynta fiiqan waxay noqon kartaa mid sax ah oo wax ku ool ah shiidida qoryaha kala duwan. 50Q Qoryaha Qoryaha Qoryaha Sharpening Qalabka waa mid ku takhasusay in loo adeegsado qalabaynta u gaarka ah qaab dhismeedka is haysta, dejinta waa macquul oo habboon, hagaajin waa ...
Waxaan soo saarnaa tiro balaadhan oo ah hal tuubbo oo BTA ah iyo tuubada mataanaha tuubada godadka qoto dheer oo laga bilaabo Ø7.76mm ilaa Ø500mm, oo ka sii weyn sidii qalab codsi oo gaar ah. Tababarrada BTA waxaa loo adeegsadaa mashiinno go'an halkaasoo qaboojiyaha uu ka dhasho madaxa cadaadiska kadibna jajabyada ayaa laga daadgureynayaa bartamaha layliga iyo tuubada daloolka. Dambiileyaasha tuubada ayaa loo adeegsadaa in lagu taageero tuubada qodista oo looga hortago gariirka iyo dhalan -rogga tuubada, iyo goobaha shaqada ayaa taageera qaybta shaqada haddii loo baahdo. ...
Mashiinka kooban: Qaabkani waa nooca ugu caansan. Baaxadda qodista qoriga Φ4 Φ Φ20mm/Φ4 Φ Φ30mm/Φ6 Φ Φ40mm Qodista qoto dheer ugu badnaan 500/1000/1500/2000/2500 mm Godka dhererka ugu sarreeya iyo saamiga dhexroorka 100: 1 Heerka shaqada OD Φ15 Φ mm100mm loogu talagalay usha ama shaqo wareegsan. Headstock Ku kaxee shaqada wareegga, xawaaraha joogtada ah 117r/min Nidaamka xakamaynta CNC SIEMENS/FANUC/GSK Hagaha tareenku wuxuu qaataa cabirrada mashiinka hagaha toosan ： ...
Beerta Warshadaha Kaaliyaha, Wadada Daxue, Dezhou, Gobolka Shandong, Shiinaha, CN253034
Naga Soo Wac Hadda: